Ona maitirwo matsva eApple Watch Series 2 anodzinga mvura kubva kune mutauri | Ndinobva mac
Tarisa iyo nyowani Apple Watch Series 2 kudzinga mvura kubva kune mutauri
Imwe yemitambo mikuru yezvitsva Nhepfenyuro dzeApple 2 ndiko kuramba kwayo mvura uye ndezvekuti izvozvi vanogona kunyudzwa uye vanogona kushandiswa mumitambo yemvura sekureba sekukumbira kune iyo wachi inoiswa haina kunyanyisa uye ndeyekuti kana ukakanda mvura pasi pechisimba kana ichipinda mumuviri wayo.
Apple inoshuma pane yayo webhusaiti kuti mutumbi weiyo nyowani Apple Watch yakagadzirwazve kuti iite isapinda mvura uye inonyudza uye chimwe chezvinhu izvo Ivo vanofanirwa kufungidzira mutauri kubvira munyika yeodhiyo, kuti paite ruzha, panofanirwa kuve nemhepo inozviparadzira.
Kune izvi, iyo Cupertino yakagadzira mutauri mutsva uyo unokwanisa kubvisa mvura yainayo mukati usati watanga kushanda. Atove muKeynote chaimo vakaratidza hupenyu hwekuti pfungwa yavakange vaita yaive yakaita sei uye isu tese takasara takashama miromo. Mazuva akazotevera takazozviziva izvozvo Apple yakanga iine patent iyo pfungwa uye ndeyekuti sekuziva kwedu tese, makwikwi haafunge nezve chimwe chinhu kunze kwekuteedzera.
Zvakanaka, nhasi chatinoda kukuratidzira ivhidhiyo iyo mushandisi weiyo nyowani Apple Watch Series 2 mune space grey aluminium akaisa kunetiweki matinogona kuona, mukufamba zvishoma, mashandisiro anoita mutauri kudzingwa kwemvura mukati. Sezvauri kuona, zvinoshandisa mafungu ezwi izvo zvinoita kuti membrane izununguke zvinova ndizvo zvinodzinga mvura.
Pasina kupokana, ndezvekufanoona kuti tichaona kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti mamwe mabrand ekushandisa pazviridzwa zvavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tarisa iyo nyowani Apple Watch Series 2 kudzinga mvura kubva kune mutauri
MacOS Sierra 2 yeruzhinji beta 10.12.1 inowanikwawo
Runyerekupe rwekuuya kweKeynote yaGumiguru 24, maMac matsva ari kuona